Raiso Knotice! Mampifandray ireo banga amin'ny teknolojia marketing | Martech Zone
Alakamisy, Aprily 3, 2008 Alahady, Aogositra 23, 2009 Douglas Karr
In 2006, Mety ho efa tsy tonga volana aloha aho rehefa naminavina fa ny 2007 dia ho taona fampifangaroana ny mpampiasa interface graphique. Tena tsy mandeha amin'ny laoniny io, saingy misy orinasa sasany miasa eo!
Fa 2008, naminavina paikady 'micro' bebe kokoa aho - ao anatin'izany ny marketing amin'ny mailaka. ExactTarget, ohatra, dia nanambara ny drafitra famoahana pejy fitobiana. Ny orinasa sasany kosa dia manalavitra azy kely kokoa!
Knotice no mety ho faminaniako!
Tamin'ity herinandro ity dia nahafaly ahy ny niresaka tamin'i Brian Deagan, CEO an'ny Knotice. Efa niresaka momba ny fahasarotan'ireo mpivarotra ny mamorona paikady rehefa marketing. "Batch and blast" no mahazatra satria ny fotoana rehetra dia atao amin'ny fanatanterahana ny mailaka noho ny fanomanana. Tena zava-dehibe tokoa ny famoahan'ny orinasa fampielezan-kevitra amin'ny 'daty' ka tsy raharahian'izy ireo raha misy ifandraisany na tsia ny tena fampielezan-kevitra ary hahatratra ny andrasan'ny mpamaky azy.
Hatramin'ny 2003, Knotice dia niasa mangina tamin'ny fametahana ny banga! Knotice dia nanambatra ny mailaka, ny marketing amin'ny finday, ny pejin-tranonkala, ny angona an-tsokosoko, ny fanadihadiana ary ny teny fikarohana mba hametrahana fifandraisana kendrena rehetra mpanelanelana. Raha tokony 'hanjono amin'ny dinamita' i Knotice, dia mampifantoka ny maunu mety amin'ny toerana mety!
Ohatra iray amin'ny Marketing Multi-Stage
Mitady solomaso ho an'i Nikon D40 zanako vavy amin'ny Google aho ary miafara amin'ny tranonkala iray. Hanome ireo teny fikarohana nampiasako mba hanatonana ilay tranonkala i Analytics. Raha nampiasaina dia ho fantatry ny tranonkala izao fa manana Nikon D40 aho.
Ankehitriny - rehefa izaho hiverina amin'ny tranokala na - tsara kokoa aza - amin'ny an mailaka Raha misoratra anarana amin'ilay tranokala aho dia mahazo tolotra vokatra mifandraika amin'ny Nikon D40 manomboka izao. Angamba mamaly fanontaniana vitsivitsy amin'ny fanadihadiana momba ny fahalianako amin'ny fakana sary aho, ary ny atiny dia kendrena lavitra hatrany amin'ny vokatra, boky, na sary miaina, sary, ary DVD.
Ity ny blurb avy Knotice eo amin'ny sehatra Concentri:
Amin'ny alàlan'ny sehatray Concentri, manolotra fomba tsotra sy mahery izahay amin'ny famoronana sy fitantanana fifandraisana misy ifandraisany marobe amin'ny sehatra mailaka, finday ary tranonkala. Miaraka amin'i Concentri, ny mpivarotra dia afaka mampiditra mora foana ny mpanjifa dizitaly ankehitriny hampitombo ny vola miditra, sady mitazona traikefa marika tsy miovaova, manatsara ny asan'ny marketing, ary manafoana ny sandam-bola tsy misy antony. Ary satria atolotra arakaraka ny tinady izany dia mandoa izay ilainy fotsiny ireo mpivarotra.
Ny tsara indrindra, ny Knotice dia tsy mitaky ny fampiantranoana ny zava-drehetra ary avy ao amin'ny tranonkalany. Manana Serivisy an-tranonkala matanjaka izy ireo ary ny tolotra atiny manokana dia azo ampidirina ao amin'ny tranonkalanao - na amin'ny alàlan'ny div na iframe. Mahery!
Toa i Knotice no lavitra lavitra noho ireo orinasa hafa amin'ity habaka ity. Be dia be ny tranonkala, Analytics ary ireo mpanome tolotra mailaka dia sahirana mifantoka amin'ny fifaninanana sy ny silo manokana, manadino ny tena olana izy ireo - mandany fotoana, ezaka, ary vola be loatra ny orinasa amin'ny fampidirana ireo vahaolana tsy mitovy mba hahazoana valiny misy dikany.
Manantena ny hahita bebe kokoa amin'ny Knotice aho!
Izaho dia Finalist an'ny I-Prize an'ny Cisco - Azafady tohano ny hevitrao
Apr 4, 2008 amin'ny 11: 45 AM
Te hanana solomaso tsy lafo vidy tsara ho an'ny Nikon D40? Sigma dia manana 17-35mm f / 2.8-4 izay azonao avy amin'ny Cameta amin'ny Amazon $ 240. Io no hany masinina f / 2.8 misy môtô ifantohana namboarina izay takian'ny D40 ho an'ny autofocus ambanin'ny $ 1000, ary tena faly tamin'ny ahy aho.
Ny ankamaroan'ny sariko farany dia nalaina tamin'io solomaso io. Ohatra.
Ho fanampin'izay dia tsy hampiasa ny D40 na ny masolavitra intsony aho tahaka ireto sary ireto, nalaina niaraka tamin'ny D40 sy ny masoko Sigma 17-35mm f / 2.8-4 mampiseho ny antony! 🙂